I-Jumpai: umdlalo wevidiyo wesikhulumi wokudala kakhulu | Kusuka kuLinux
I-Jumpai: umdlalo wevidiyo wesikhulumi onobuciko kakhulu
Isaka | | I-GNU / Linux, Imidlalo
I-Jumpai iyindalo ye-Frame-Perfect Studio, ungayithola ku- le webhusayithi ukuthola eminye imininingwane noma ukuyithola. Njengoba ukwazi ukubona esithombeni, kungabonakala njengomdlalo wevidiyo ofana namanye amapulatifomu, umlingiswa oweqa izithiyo ezahlukahlukene ezifana noMario, kepha lena inokuthile ongakuthanda. It is ngokukhethekile zenzelwe labo abathanda ukwakha, kokuba umhleli entsha level ukuthi ungakwazi ukuklama ngokwakho.
Ine- isibuyekezo esisha okungeza okuqukethwe okuncane impela kuJumpai, kufaka phakathi inganono engadubula abadlali nezinto, ipulatifomu likakhaphethi womlingo, amabhlogo amaningi amasha wamazinga okwakha, izinto ezintsha zezimonyo nemihlobiso, izinketho zolimi lwesiGreki nesiJalimane (phakathi others) isiyatholakala, njll. Izici eziningi ezintsha okufanele uzame ku-Linux distro yakho.
Kubuye kwalungiswa, manje UJumpai ukhokhisa ngokushesha okukhulu Futhi izikhathi manje zizofushane ukuze ukwazi ukusebenzisa kakhulu ukungabheki esikrinini ngenkathi ulinde umdlalo wakho omusha. Ngakolunye uhlangothi, amathuluzi wokwenza amazinga amasha nawo athuthukisiwe. Manje lawo mathuluzi enziwe asetshenziswa kalula futhi kwenziwe imizamo yokwenza ngcono i-interface yomsebenzisi, imisindo emisha ingeziwe, njll.
Uma usuzakhele amazinga akho ungawahlola futhi udlale nawo ngemodi yabadlali abaningi, ukuze ukwazi ukudlala nabanye online.
Kokunye, uzozijabulisa futhi kuzokuxhumanisa kakhulu nanoma yisiphi esinye isihloko sepulatifomu. Yimidlalo yevidiyo enemidwebo elula kakhulu, futhi lokho kusikhumbuza okwakudala, kepha banokuthile okuqhubeka nokuheha ukunakwa okuningi kubadlali bamageyimu. Ngendlela, ungayilanda mahhala, iyi-ZIP engaba ngu-147MB yeLinux, yize ikhona kwezinye izinhlelo zokusebenza, unenguqulo ye-Java ye-multiplatform.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-Jumpai: umdlalo wevidiyo wesikhulumi onobuciko kakhulu
I-EMISOFT Decrypter ithuluzi lokuthola amafayela abhalwe ngekhodi ngu-LooCipher
I-Deepin 15.11 ilapha, nakhu okusha